Shaqaalaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga oo wax laga weydiiyay dilkii Jamal Khashoggi – The Voice of Northeastern Kenya
Shaqaalaha qunsuliyadda Sacuudiga ee Turkiga oo wax laga weydiiyay dilkii Jamal Khashoggi
5 ka mid ah shaqaalaha qunsuliyadda boqortooyada Sacuudi Carabiya ay ku leedahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa qoray fariimo ku saabsan waxyaabaha ay ka ogyihiin dilka suxufigii la waayay 2-dii bishan Jamal Khashoggi.
Dadkan ayaa marqaatida loo adeegsanaya baaritaanada la xariira dhacdadaasi.
Dhanka kale madaxda wadamada Turkiga iyo Maraykanka ee kala ah Recep Tayyip Erdogan iyo Donald Trump ayaa khadka taleefoonka ku wada xariiray waxayna ka hadleen arrinta cakiran ee wariyaha la waayay Jamal Khashoggi oo uu sacuudigu sheegay inuu ku dhintay dagaal ka dhacay gudaha qunsuliyadda uu ku leeyahay magaalada Istanbul taaso aanan ka dhaadhicin hoggaamiyaasha caalamka.
Bayaan ka soo baxay madaxtooyada Turkiga ayaa lagu sheegay in Trump iyo Erdogan ay ku heshiiyeen in si faahfaahsan loo cadeeyo halka uu suxufigaasi ku dambeeyay iyo sidii ay wax u dhaceen.
Wadamada Ingiriiska, Jarmalka, Faransiiska, Turkiga , Canada, hay’adda caalamiga ee xuquuqul aadanaha ee Amnesty iyo Midowga Yurub ayaa sheegay in jawaabta ay xukuumada Riyaadh bixisay ahayn mid dhameystiran oo lagu qanci karo.
Waxay dalbadeen in baaritaano madax bannaan la sameeyo si xaqiiqda looga sal gaaro.
Hoggaamiyaha Turkiga Mr. Erdogan ayaa dhankiisa ballanqaaday inuu berri oo talaado ah soo bandhigayo xaqiiqda jirta ee uu Sacuudiga doonayo inuu ka leexiyo indhaha caalamka.
Sido kale Sacuudiga ayaa sheegaya inuusan ka warqabin halka la geeyay meydka Jamal.
Wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada , Cadel al-Jubeir ayaa dhilka Khashoggi ku tilmaamay khalad aad u weyn sido kalena ay ka xunyihiin dhibaatada la soo daristay qoyska suxufigaasi.
← Taiwan oo baareysa shil ay ku dhinteen 18 qof
Khashoggi issue does not concern only Riyadh says Turkish presidential spokesman →